Jilli Yukreenii fi Raashaa Wiixta Har’a Marii kan Itti Fuufanii Jiru
Bitootessa 14, 2022
Jilli Yukreenii fi Raashaa Wiixta Har’a Marii kan Itti Fuufanii Jiru (Suuraa: Twiterii gorsaa pirezdantii Yukireen irraa fudhatame)
Raashaan maadhee waraanaa Yukreen gama dhiyaa keessa jiru, kan daangaa polaand irraa fageenya kiloo meetra 25 fagaaatu Misaa’eelii kiruuziin eega haleeltee guyyaa tokko booda mariin kun itti fufee. Polaand miseensa Neetoo ta’uun ni yaadatama.
Waaltaa sadarkaa addunyaa kan naga eegumsaa fi nageenyaa irratti haleellaa gaggeeffame Kanaan, yoo xiqqaate namnii 35 kan du’an yoo ta’u 134 mada’anii jiran. Prezidaantiin Yukreen volaadmir Zeleeneskii Dilbata kaleessaa akeekkachiisa ifa galaa biyyoota gama dhiyaaf kennanii turaniin, maadhee waraanaa lafa Neetoo fi humnootii Yukreen waliin shaakalan akka haleelamuu ibsanii turan.
Kanneen mada’an irra hedduun gara hospitaala Novoiavorisk jiruutti kan geeffaman yoo ta’u, hangi tokko gara hospitaala gurguddaa kutaa sana keessa jiranti ergaman.
Zeleniiskiin Dilbata kaleessaa galgala akka jedhanti, Prezidaantii Raashaa Vladmiir Putiin waliin walgahii taa’uuf haala mijeessuuf kan yaalan ta’uus hin milkoofne.
Garu jiloonni biyyoota lameenii karaa itti gargaarsii dhala namaa seenuu danda’uu qindeessuuf akkasumas, walii galtee dhukaasa dhaabinsaa tolfachuuf guyyaa guyyaan dubbataa jiru.
Itti aantuu ministriin haajaa alaa kan Yunaaytid Isteetes Weendii Sheerman Televiziyoona Fox jedhamu waliin gaaffii fi deebii gaggeessaniin, prezidaantiin Raashaa weerara torbanneeniif gaggeessee dhaabuun walii galtee dhukaasa dhaabiinsaa akk tolfamuuf Amerikaan dhiibbaa hedduu gochaa jirti.
Gama kaaniin gorsaan waa’ee nageenya biyooleessaa kan Yunaaytid Isteetes Jake Suleevaan fi aangawoonni waajiira isaanii kanneen biroo akkasumas ministriin dantaa Alaa Amerikaa wiixata har’a Room xaaliyaanii keessatti, Daayreeekteera komiishiina dhimmootii alaa kan Chaayinaa waliin walga’uuf jiru.
Ministeeronni Haajaa Alaa Raashiyaa fi Yukireen Turkii Keessatti Wal Arguun Mari’atan
Dura Taa’aan Gamtaa Afriikaa Prezidaantii Raashaa Waliin Mari’atan
Kongiresiin Ameerikaa Seera Boba’aa Raashiyaa Ugguru Raggaasise
Dhalatonni Tigraay Hidhaman Isa Tokkumoomaan Mootummootaa Tilmaame Ka Caalu Tahuu Rooyiters Gabaase
Mootummaan Itiyoophiyaa fi Riphxeeloltoonni Tigiraay Marii Araaraatti Waan Dhihaatan Fakkaata Jedhame
Teeksaas Keessati Godaantonii 46 Du’anii Argaman
Joo Baayidan fi Prezidaantiin Senegaal Maakii Saali Waliin Arganii Mari’atan
Siriyaa Keessatti Gaazexxessaa Amerikaa Badee Hin Argamiin Jira